२८ वर्षे युवकको ८२ वर्षीयासँग बस्यो पिरती, गरे विवाह
तपाईंले थुप्रै पटक मानिसको मुखबाट ‘प्रेम अन्धो हुन्छ’ भन्ने वाक्य सुन्नुभएको होला । प्रेममा पर्ने मानिसहरु एकअर्काको प्रेमबाहेक केही पनि सोच्दैनन् । उनीहरु न त उमेर हेर्छन् न रुप नै । यस्तै केही भएको छ २८ वर्षका सोफयां लोहो डानडेलसँग ।
सोफयां इन्डोनेसियामा बस्छन् । २८ वर्षका यी युवक प्रेममा परे । प्रेम ती महिलाको आवाजमार्फत भयो जसको फोन उनलाई गलत नम्बरमार्फत आएको थियो । तर सोफयांलाई उक्त आवाज यति मन पर्यो कि उनले त्यो नम्बरलाई सेभ गरे । फोन मार्था पोटूको थियो जसले गल्तीपूर्वक सोफयांलाई फोन गरेका थिए । मार्था ८२ वर्षका विधवा महिला थिइन् जो आफ्नो घरमा एक्लै बस्थिन् । सोफयांले त्यसै नम्बरमा दोस्रोपटक फोन गरे र त्यसपछि दुबैबिच कुराकानी हुन थाल्यो । यी युवकलाई थाहा थिएन कि त्यो मधुर आवाज भएकी महिला उनको उमेरको नभई आफ्नी हजुरआमाको उमेरकी हुन् । फोनमा यी दुईको निकै दिनसम्म कुराकानी भइरह्यो ।
फोनमार्फत सुरु भयो प्रेमः
मार्थालाई देखेर दंगः
सोफयां ८२ वर्षकी मार्थालाई देखेर अश्चर्यचकित भए तर आफू एक अर्कासँग वास्तविक प्रेम भएकाले सोफयांले बिना कुनै संकोच मार्थालाई विवाहको प्रस्ताव राखे । यो प्रस्ताव देखेर मार्था दंग भइन् र प्रस्ताव मंजुर गरिन् । दुबैले एक अर्कासँग विवाह गरे ।
६ घण्टाभित्र हारे ३५ अर्ब, पाँच श्रीमतीः जुवामा बर्बाद भए साउदी राजकुमार
एजेन्सी जेठ २७ – तपाईंले साउदी अरबका धनाढ्यबारे थुप्रै कहानी सुन्नुभएको होला । आजकाल इन्टरनेटमा साउदी अरबका रा..
यसकारण सोसल मिडियामा देखिएका तस्बिरमाथि विश्वास नगर्नुहोस्, मान्नैपर्छ फोटोग्राफरलाई
बोर्ड पाण्डा जेठ २४ – उत्कृष्ट फोटोका पछाडि दक्ष र रचनात्मक फोटोग्राफरको हात हुन्छ तर उनीहरु कतिसम्मको रचनात्म..
आखिर विमानको रङ किन सेतो हुन्छ ? थाहा पाउनुस् विमानसँग जोडिएका केही नसुनेका तथ्य
एजेन्सी जेठ २४ – हामीमध्ये केहीले विमानमा यात्रा गरेका छौं । तर विमानसँग जोडिएका केही तथ्य यस्ता पनि छन् जसबार..
स्कूलमा पोर्न हेरिरहेकी थिइन् ९ वर्षीया बालिका, शिक्षकले सोध्दा दिइन् यस्तो जवाफ
एजेन्सी जेठ २४ – टेक्सासको एक प्राइमरी स्कूलका शिक्षकले ९ वर्षीया बालिकालाई आइप्याडमा पोर्नोग्राफी सर्च गरिरहे..
मानिसलाई अभिवादन गर्न नपरोस् भनी यी युवतीले गरिन् २८ वर्षदेखि दृष्टिविहिनको नाटक
अडिटी सेन्ट्रल जेठ २१ – २८ वर्ष अघि, मेड्रिडकी कार्मेन जिमेनेज आँखाको भयानक संक्रमणका कारण दृष्टिविहिनी भइन् ।..
पत्याउनु हुन्छ ? साङ्लाको दुधले तपाईंको शरीरलाई बनाउनेछ शक्तिशाली
लण्डन – घरभित्र साङ्ला निकै सजिलै पाइन्छन् । यो शरिरका लागि हानिकारक मानिने भएकाले यसलाई हटाउन विभिन्न ..
भिखारीले ७५ लाखको कार चढेपछि हंगामा
लण्डन – इङल्याण्डको कोर्नवाल काउन्टीका भिख माग्दै हिँड्ने एक भिखारीले महंगो कार चढ्ने गरेको सार्वजनिक भएपछि स्..
झुटा होइनन् यी हुन् वास्तविकः सही समयमा खिचिएका १९ रोचक तस्बिरहरु
एजेन्सी जेठ १८ – समय र एंगल मिलेका तस्बिर उत्कृष्ट हुन्छन् । परफेक्ट टाइमिङ र सही एंगलले तस्बिरलाई निकै राम्रो..